विकासकर्ताहरूको लागि अधिक उपयोगी साइट स्क्र्यापिंग उपकरणहरू - Semalt बाट संक्षिप्त सिंहावलोकन
वेब क्रोलि these यी दिनहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा लागू हुन्छ। यो एक जटिल प्रक्रिया हो र धेरै समय र प्रयासको आवश्यक पर्दछ। यद्यपि बिभिन्न वेब क्रलर उपकरणहरूले डाटालाई सहज-उपयोग र व्यवस्थित गरेर सम्पूर्ण क्रलिw प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित गर्न सक्दछन्। मितिमा सबै भन्दा शक्तिशाली र उपयोगी वेब क्रलर उपकरणहरूको सूची जाँच गरौं। तल वर्णन गरिएका सबै उपकरणहरू विकासकर्ताहरू र प्रोग्रामरहरूको लागि पर्याप्त उपयोगी छन्।
Scrapinghub एक क्लाउड-आधारित डाटा निकासी र वेब क्रलिling उपकरण हो। यसले सयौंदेखि हजारौं विकासकर्ताहरूलाई कुनै पनि मुद्दा बिना मूल्यवान जानकारी ल्याउन मद्दत गर्दछ। यो प्रोग्रामले क्रोलराको प्रयोग गर्दछ जुन स्मार्ट र अद्भुत प्रोक्सी रोटेटर हो। यसले बोटिंग बोट काउन्टर-मापन समर्थन गर्दछ र सेकेन्डमा बोट-संरक्षित वेबसाइट क्रल गर्दछ। यसका साथै यसले प्रोक्सी प्रबन्धको कुनै आवाश्यकता बिना बिभिन्न आईपी ठेगानाहरू र विभिन्न स्थानहरूबाट तपाईंको साइटलाई अनुक्रमणिका गर्न दिन्छ, धन्यबाद, यस उपकरणले चीजहरू द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्न विस्तृत HTTP एपीआई विकल्पको साथ आउँदछ।
ब्राउजरमा आधारित वेब क्रलरको रूपमा, Dexi.io ले तपाईंलाई स्क्र्याप गर्न र दुबै सरल र उन्नत साइटहरू निकाल्न अनुमति दिन्छ। यसले तीन मुख्य विकल्पहरू प्रदान गर्दछ: एक्स्ट्र्याक्टर, क्रलर, र पाइपहरू। Dexi.io एक उत्कृष्ट र अद्भुत वेब स्क्र्यापि or वा विकासकर्ताहरूको लागि वेब क्रलिling प्रोग्राम हो। तपाईं या त बाहिर निकालिएको डाटा तपाईंको आफ्नै मेसिन / हार्ड डिस्कमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ वा यसलाई डेक्सी.io सर्भरमा होस्ट गर्न दुईदेखि तीन हप्तासम्म यो अभिलेख राख्नु अघि।
Webhose.io डेवलपर्स र वेबमास्टर्स को वास्तविक समय डाटा प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ र भिडियो, छवि, र पाठ सहित लगभग सबै प्रकारको सामग्री क्रल गर्दछ। तपाईं थप फाईलहरू निकाल्न र स्रोतहरूको विस्तृत एर्रे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै JSON, RSS, र XML तपाईंको फाइलहरू कुनै समस्या बिना नै सुरक्षित गर्न। यसका साथै, यस उपकरणले यसको अभिलेख सेक्सनबाट ऐतिहासिक डाटा पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ, जसको मतलब तपाईंले अर्को केही महिना केही पनि गुमाउनु हुने छैन। यसले अस्सी भन्दा बढी भाषाहरू समर्थन गर्दछ।
Import. आयात गर्नुहोस्। Io:
विकासकर्ताहरूले निजी डाटासेटहरू बनाउन वा आयात गर्न सक्दछन्। विशेष वेब पृष्ठहरूबाट आयात CS. आयात गरेर आयात गर्नुहोस्। यो एक उत्तम र सब भन्दा उपयोगी वेब क्रलिling वा डेटा निष्कर्षण उपकरणहरू मध्ये एक हो। यसले सेकेन्ड भित्र १००+ पृष्ठहरू निकाल्न सक्छ र यसको लचिलो र शक्तिशाली एपीआई को लागी परिचित छ, जसले Import.io लाई प्रोग्रामेटमा नियन्त्रण गर्न सक्दछ र तपाईंलाई व्यवस्थित डाटा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभवका लागि यस कार्यक्रमले म्याक ओएस एक्स, लिनक्स र विन्डोजको लागि नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंलाई डाटा र पाठ दुबै ढाँचामा डाटा डाउनलोड गर्न दिन्छ।
यदि तपाईं एक पेशेवर विकासकर्ता हुनुहुन्छ र सक्रिय रूपमा शक्तिशाली वेब क्रलिling प्रोग्रामको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले le०legs को प्रयास गर्नु पर्छ। यो एक उपयोगी उपकरण हो कि डाटा को एक विशाल मात्रा ल्याउँछ र हामीलाई कुनै समय मा उच्च प्रदर्शन वेब क्रलिंग सामग्री प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, le० लेगले द्रुत रूपमा काम गर्दछ र बहु सेकेन्डमा बहु साइटहरू वा ब्लगहरू क्रल गर्न सक्दछन्। यसले तपाईंलाई समाचार र सोशल मिडिया साइटहरू, RSS र एटम फिड, र निजी ट्राभल ब्लगहरूको पूर्ण वा आंशिक डाटा ल्याउँदछ। यसले तपाईंको JSON फाईलहरू वा गुगल डक्समा संगठित र राम्रो संगठित डाटा बचत गर्न सक्दछ।